Global Voices teny Malagasy » FOKO: Barcamp nahomby teto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
FOKO: Barcamp nahomby teto Madagasikara
Voadika ny 14 Novambra 2018 3:55 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Raveloaritiana Mamisoa
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra, taona 2008)
Ny Asabotsy 4 oktobra 2008, natao tao Hotel IVOTEL, Ambohidahy ao Antananarivo renivohitra ny BarCamp Madagascar . Nokarakarain'ny FOKO , nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, ity no hetsika voalohany tahaka izany teto Madagasikara. Ny mpamatsy tolotra aterineto lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Moov, no nanohana  ny BarCamp tamin'ny fanomezana fahafahana miditra aterineto maimaim-poana ho an'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny hetsika. Misaotra ireo mpanohana satria maimaim-poana ny fidirana, anisan'izany koa ny kafe, ny sakafo ary T-shirts fahatsiarovana ho an'ireo mpandray anjara.
Dago Tiako manoratra momba ny Barcamp Madagascar:
Ny foto-kevitry ny Barcamp dia ny hanangona ny olona rehetra hifantoka amin'ny ordinatera, aterineto, teknolojia misokatra, anisan'izany ireo bilaogera.
Afaka nihaona tamin'izany andro manokana izany ireo bilaogera rehetra teto Madagasikara. Ary nizara fahalalana, traikefa sy toro-hevitra tsirairay avy izy ireo.
Jogany manoratra  momba ireo fanamby natrehin'ny FOKO tamin'ny fikarakarana ny hetsika:
When we thought  about organizing a Barcamp in Madagascar, we expected to get the best participants in town, in the country and in the world. It took us 3 months to convince….our own people to join.
Rehefa nieritreritra  hikarakara Barcamp eto Madagasikara izahay, dia nanantena ny handray ireo mpandray anjara tsara indrindra ao an-tanàna, eto amin'ny firenena sy manerantany. Telo volana no nanaovanay fandresena-dahatra tamin'ireo olonay manokana mba handray anjara.
Iray tamin'ireo fahagagana lehibe indrindra sy zava-bita ny fihaonana tamin'ireo Vondrona Open Source roa lehibe indrindra eto Madagasikara: C3FL sy AMUL.
Manome ny toe-draharaha  izy:
Ny fanombohana Barcamp dia fahafahana nampiseho ny fahaizanay sy ny fahafahanay amin'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia, ary koa manaporofo amin'ny tenanay, ny vondrona teknolojia Malagasy tena mavitrika saingy mitoka-monina, fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenenay izahay
Jogany mamaritra ny lafiny mazava indrindra tamin'ny hetsika :
Ireo mpandrindra ny Foko, izay heverina fa mandrindra ny zava-drehetra ary manao izay rehetra azony atao mba tsy hahatonga ireo fifanakalozan-kevitra hafàna bebe kokoa tsy araka ny tokony izy. Mahafantatra an'i Jogany mora tezitra sy ny vava petsapetsan'i Stéphane … dia hitanao fa asa tsy mora izany – “Iceman, ampio, pssiiit, Iceman !!”, Jogany izay very miaraka amin'ny ICE – “Iza no nandefa ity sioka frantsay ity?” ,. .. “Tsy misy bateria intsony? Tsy tokony ho izany!” hoy i Diana.
Manome ny famintinana ny fizotry ny andro koa izy.  75 teo ireo mpandray anjara nanatrika ny fihaonana.
Nanatrika ny BarCamp i Eduardo Ávila  avy ao amin'ny Voces Bolivianas. Nanampy ireo tanora bilaogeran'ny FOKO izy mba “hitantara” ny hetsika. Napetraka ny latabatra miaraka amin'ny finday solosaina efatra tao ambadiky ny efitrano mifandray amin'ny wifi haingam-pandeha, ary maro tamin'izy ireo no nisioka mivantana  ny hetsika.
Manana vaovao marobe momba ny hetsika ny Barcamp Wiki. Nanaparitaka ny hetsika ny vondrona Facebook iray . Ato , ato  sy ato  ireo sary nandritra ny hetsika.
Mampahafantatra ny tenan'izy ireo tao amin'ny Barcamp ao anatin'ity lahatsary ity ireo bilaogera FOKO:
Ity ny famintinana ny fivoriana voalohany .
Sixthman ao amin'ny Madagascar Not The Movie  mamaritra ny zava-niainany:
Fotoana nahafahako nahita ny sasany tamin'izy ireo izay fantatro tamin'ny alalan'ny sary tamin'ny bilaogy izany, tahaka an'i avylavitra, DotMg sy Jentilisa.
Nanohina ahy betsaka ny fihetseham-po sy ny rivotra niainana. Nafana, nilamina sy nahafinaritra izany. Tahaka ny eo amin'ireo namana taloha sy ireo olona ao amin'ny fianakaviana – tsy misy zavatra tena hoe sarotra be.
Pati nizara fampahafantarana  momba ny diany tany Bruxelles mba hanatrika ny fihaonamben'ny Global Interdependence.
Andry ao amin'ny The Malagasy Cyber Adventure  mitatitra hoe:
Nahoana no mbola tsy nahazo IXP ny eto Madagasikara? “Izany no fanontaniana napetrak'i Haja, mpiandraikitra ny anaran-tsehatra .mg, mpikambana ao amin'ny AMUL …. Raha tsotsorina, ny IXP dia rafitra iray izay ahafahana mahazo fifandraisana aterineto amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa anatiny. Hanafaka ireo mpanome tolotra aterineto eto an-toerana tsy hiantehitra amin'ny fifandraisana avy any ivelany ny IXP.
Ny famelabelarana izay nanohina ahy indrindra dia ny iray momba ny lodjban, fiteny vaovao, fiteny hafa izay azon'ny olombelona sy ny ordinatera takarina!
Faranantsika amin'ny kabarin'i Joan izay momba ny fandraisana andraikitry ny Creative Commons (CC) eto Madagasikara.
Raha ny marina, ity no hany famintinana ny Barcamp avy amiko: “Nahazo namana vaovao tao aho”.
Mandritra ny volana Jona, Jolay sy Aogositra, na nandeha niala sasatra na sahirana tamin'ny fanadinan'izy ireo ny bilaogeran'ny Foko. Niverina izy ireo tamin'ny volana Septambra niaraka tamin'ny bilaogy bebe kokoa. Ireto  lahatsarotra sasany nasongadina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/14/130209/
 BarCamp Madagascar: http://www.barcamp-madagascar.net/
 no nanohana: http://www.barcamp-madagascar.net/antananarivo/2008/09/25/barcamp-madagascar-digest/
 manoratra : http://ariniaina.wordpress.com/2008/10/06/barcamp-madagascar/
 lafiny mazava indrindra tamin'ny hetsika: http://www.purplecorner.com/2008/10/08/my-foko-side-of-the-barcamp-story/
 Eduardo Ávila: http://www.barrioflores.net/blog/
 nisioka mivantana: http://twitter.com/Barcamp_MDG
 vaovao marobe : http://www.barcamp-madagascar.net/doku.php?id=english
 vondrona Facebook iray: http://www.new.facebook.com/pages/BarCamp/51364790370
 ao anatin'ity lahatsary ity : http://foko-madagascar.blip.tv/#1331445
 famintinana ny fivoriana voalohany: http://www.barcamp-madagascar.net/antananarivo/2008/10/04/the-first-session-in-the-afternoon/
 Madagascar Not The Movie: http://sixthman.wordpress.com/2008/10/08/my-2-hours-of-barcamp-madagascar/
 nizara fampahafantarana: http://patiettoi.wordpress.com/2008/10/04/patis-trip-in-brussels/
 The Malagasy Cyber Adventure: http://andrydago.wordpress.com/2008/10/09/13/